Hiiraan Online News About Somalia » Dhaxal-sugaha Sacuudiga oo markii ugu horeysay si aan la fileyn uga hadlay Dilka Khashoggi, Sheegayna in…
Dhaxal-sugaha Sacuudiga oo markii ugu horeysay si aan la fileyn uga hadlay Dilka Khashoggi, Sheegayna in…
Oct 25, 2018 - jawaab
Dhaxal-sugaha Sacuudiga Mohamed Bin Salman ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dilka loo geystay saxafiga Jamal Kashoqgi, isagoo ka hadlayey shirka Ganacsiga iyo Maalgashiga Sacuudiga ee magaalada Riyad ka socda.
Mohamed Bin Salman ayaa sheegay in dilka loo geystay saxafiga uu yahay mid aad u fool xun oo xanuun badan ku abuuray dadka Sacuudiga, kaasoo aan lahayn wax marmarsiiyo ah, wuxuuna caddeeyay in dadkii ka dambeeyay falkaasi cadaaladda la hor keeni doono, tallaabana laga qaadi doono.
Wuxuu caddeeyay in Sacuudiga iyo Turkiga ay ka wada shaqeyn doonaan sidii cadaaladda loo waafajin lahaa dilka saxafiga, isla markaana aanu wax khilaaf ah u dhaxeynin dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga inta ay joogaan Boqor Salman, madaxweyne Erdogan iyo isaga.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo uu hore Dhaxalsugaha u sheegay inuu Saxafiga Jamal ka baxay Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul xilli uu wareysi bixiyay maalmo kadib markii la waayey weriyaha.
Maanta ayey ahayd markii ay telefoonka ku wadahadleen madaxweynaha Turkiga iyo Dhaxalsugaya Sacuudiga, kadib dalab ka yimid Maxamed Bin Salman, waxayna isla garteen in la iska kaashado kiiska dilka Jamal Kashoqgi.
Dad badan ayaa aamisan inuu Dhaxal-sugaha bixiyey amarka lagu dilay saxafiga Jamal Kashoqfi oo dhaliili jiray siyaasadihiis, laakiin Sacuudiga ayaa dadaal weyn ku bixinaya in tuhunkaas laga leexiyo.